सत्ता लोभले फेरि फुट्ने भयो माओवादी, प्रचण्डलाई चुनौती दिने यी हुन् हिम्मतवाला ?Nepalpana - Nepal's Digital Online
सोमवार, आश्विन ४ गते २०७८
२०७८, आश्विन ४ गते
सत्ता लोभले फेरि फुट्ने भयो माओवादी, प्रचण्डलाई चुनौती दिने यी हुन् हिम्मतवाला ?
नेपालपाना श्रावण २१ २०७८
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा अन्तरसंघर्ष बढेको छ । पटक पटक फुटबाट कमजोर बनेको माओवादी सत्ता लिप्साका कारण फुटको संघारमा पुगेको हो ।
रामबहादुर थापा बादलदेखि लेखराज, मोहन वैद्य हुँदै विप्लवसम्म टुक्रा टुक्रा भएका बेला माओवादीले फुटको अर्को चोट खाने खतरा बढेको छ । कारण हो सत्ता । अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै अगुवाईमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
उक्त सरकारमा माओवादी सहभागी छ । ७ मन्त्रालय पाउनेमा २ मन्त्री भइसकेका छन् । अब ५ मन्त्रालय टुंग्याउनुपर्ने छ । तर प्रचण्डलाई यति सकस परेको छ कि उनले केही दिनअघि पार्टीका ४९ अर्थात सबै सांसद नै मन्त्री बन्न खोजेको भन्दै आफू तनावमा रहेको बताएका थिए ।
प्रचण्डले भनेजस्तै उनी अहिले साँच्चिकै तनावमा रहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । खासगरी मन्त्री छान्न प्रचण्डलाई महाभारत बनेको छ । एकातिर पार्टी फुट्ने खतरा र अर्कोतिर अमुक व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन कार्यकर्ता पंक्तिको मागले प्रचण्ड चेपुवामा परेका हुन् ।
माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ । हाल माओवादीबाट जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
अब उपप्रधानमन्त्री सहित एक जना नयाँ नेताले सरकारमा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ । जसमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दरो दाबी र लबिङ गरेका छन् । उनले उपप्रमसहित परराष्ट्र वा शिक्षा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।
तर अर्कोतिर श्रेष्ठलाई सरकारमा जान नदिन गृहजिल्ला गोरखासहित विभिन्न जिल्लाका पुराना नेता तथा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाहरुले एकढिक्का भएर प्रचण्डमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । यस्तोमा प्रचण्ड चेपुवामा परेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार नारायणकाजीलाई छोड्दा पार्टी फुट्न सक्ने भय प्रचण्डलाई छ । मन्त्री नबनाए जुनसुकै कदम चाल्ने नारायणकाजीले आफ्नो सर्कलमा बताउँदै आएका छन् ।
जसमा प्रचण्ड झस्किएका छन् । अर्कोतिर आफ्नो पार्टीभित्रको कारर्यकर्ताको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तनाव प्रचण्डलाई छ । दोहोरो चेपुवामा परेका प्रचण्ड एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवाको शरणमा पुगेका छन् ।
प्रचण्ड नारायणकाजीलाई लगेर मंगलबार माधव निवास कोटेश्वरमा छलफल गरेका छन् । माधवले मध्यस्तताको प्रयास गरे पनि नारायणकाजी नमानेको बुझिएको छ । यद्यपि नारायणकाजी सार्वजनिक रुपमा भने आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्डलाई कुनै दबाब नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । नारायणकाजीसँगै कृष्णबहादुर महराले पनि माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । नारायणकाजीका विषयमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि कुरा गरेका छन् ।
तर देउवाले संविधान नमिच्ने भन्दै नारायणकाजीलाई मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका नारायणकाजी संविधानको धारा ७८ (४) अनुसार मन्त्री बन्न पाउने अवस्था छैन ।
उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ लेखिएको छ ।
देउवाले यहीँ धारामा टेकेर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्दा विवाद बढ्ने भन्दै नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउन नसकिने जवाफ प्रचण्डलाई दिएका छन् ।
यसले पार्टी फुटमा कस्तो असर पार्ला हेर्न बाँकी छ ।
एमाले-माओवादी : प्रचण्ड-नेपाल समुहको बैठकले गर्याे छुट्टिने निर्णय !
अन्तत: औपचारिक रुपमै एमाले र माओवादी अलग भए, अब कसको बन्ला सरकार ?
ओली-प्रचण्डमिलेपछि 'नेकपा एमाले र माओवादी' पार्टी दर्ता गर्ने सन्ध्या तिवारी र गोपाल किराँतीलाई निर्वाचन आयोगले दिए यस्तो निर्देशन !
नझुक्क्निुस ! अब, एमाले र माओवादी दुई अलग पार्टी हुन्
श्रावण २१, २०७८ बिहिवार ०८:०३:५१ बजे : प्रकाशित
पिथौरागढ पुग्यो नेपाली सेनाको टोली, भोलिदेखि भारतीय सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने
बेलायतले पाकिस्तानलगायतका देशलाई हटायो नेपाललाई भने रेडलिस्टमै राख्यो
एमसीसी पास गराउन फातिमासँग प्रचण्डका दुई माग : ‘आतंककारी’ बिल्ला हटाउनुपर्ने, कालो धनमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा
प्रचण्ड-माधव-उपेन्द्रले देउवालाई फसाएपछि एमाले चिन्तित ! यस्तो प्रचण्डको 'शकुनी चाल'
सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको तत्काल व्यवस्था होस् : कांग्रेस नेता निधि
एमाले विधानमा व्यापक संशोधनको तयारी, हट्ने भयो पोलिट्ब्यूरो
फ्रान्सले राजदुत फिर्ता बोलाउने भनेपछि अमेरिकाले बिशेष कदम चाल्दै
संविधानविद्ले नै भने 'पुरावलोकन आवश्यक छ'